Akhriso Magacyada iyo Qabiilada ay kasoo kala jeedaan Madaxweynayaasha is magacaabay ee kusugan Magaalada Kismaayo | Salaan Media
Akhriso Magacyada iyo Qabiilada ay kasoo kala jeedaan Madaxweynayaasha is magacaabay ee kusugan Magaalada Kismaayo
Magaalada Kismaayo ee Xarunta Gobolka Jubada Hoose waxaa kusugan tiro madaxweynayaal oo siyaabo kala duwan isku caleemo saaray sheegtayna masuuliyada maamul Goboleed ee yeeshaan Gobolada Jubooyinka iyo Gedo.
Madaxweynayaashan kaligood is caleemo saaray ayaa gaadhaya ilaa afar Madaxwyne kuwaa siyaabo kala duwan beelaha ee kasoo jeedaan Kismaayo ugu doorteen noqoshada Madaxweynaha Maamulka Jubaland State.
Sheekh Axmed Madoobe Hogaamiyaha Kooxda Raaskanbooni ayaa lagu doortay shir aan loo dhameyn oo kasocday Magaalada Kismaayo muran badana dhaliyay kaa oo gaba gabadii Axmed Madoobe loogu caleemo saaray in uu yahay Madaxweynaha Maamul Goboleedka Jubaland State.
Saacado yar kadib markii Axmed Madoobe la shaaciyay in la doortay Barre Aadan Shire Hiiraale oo isna ah Siyaasi caan ka ah Kismaayo iyo guud ahaan Dalka waxa uu ku dhawaaqay in uu yahay Madaxweynaha Maamulka Jubaland State Odayaal iyo Ergooyin kala duwana u doorteen in uu Noqdo Madaxweynaha afarta Sano ee soo socoto ee Maamulka Jubaland State.
Xili halkaas ee arintu mareyso ayaa hadana waxaa soo if baxay Madaxweynihii Sadaxaad oo yeesho Gobolada Jubooyinka oo lagu ,magacaabo Cumar Buraale Axmed oo isna sheegay Ergooyin kabadan 500-oo xubnood in ee u doorteen in uu Noqdo Madaxweynaha Maamul Goboleedka Waamo State .
Waxaa sidoo kale hadana soo shaac baxay Madaxweynayaal kale uu kamid yahay Cabdi Xuseen Baali oo isna Magaalada Kismaayo kaga dhawaaqay in uu yahay Madaxweynaha Maamulka Jubaland State ayna doorteen dadka deegaanka ee rasmiga ah uuna yahay Madaxweynaha Xaqa ah.
Halkan ka Aqriso Qabiilada ee kasoo Jeedaan Madaxweynayaasha aan la aqoonsan ee Kismaayo kusugan
1-Sheekh Axmed Islaam (Axmed Madoobe ) – Daarood (Ogaadeen)
2-Col Barre Aadan Shirre Hiiraale – Daarood (Mareexaan)
3-Cumar Buraale Axmed – Dir (Wardee Cali)
4-Cabdi Xuseen Baali -Hawiye (Gaaljecel)